Ukubhabha kunye nokuBamba
Ngezixhobo ezikwintanethi kunye nohlaziyo kwi-COVID-19 eMzantsi Afrika, nceda undwendwele i-SAcoronavirus.co.za
Eyasungulwa ngo-1969, iNarrowtex ibhiyozela iminyaka engama-50 yokugqwesa kwemveliso. I-Narrowtex ngumvelisi kunye nomthumeli wempahla ephothiweyo yelizwe, ukubopha ipholiyesta ephothiweyo, ukubopha imitya edityanisiweyo, ukubopha umtya, ukubopha ibhanti, ibhande lemizi mveliso kunye neeteyiphu zekhethini.
Ukusuka kumava kunye nobuchwephesha bobuchwephesha, kunye nemigangatho yomgangatho weprimiyamu, iNarrowtex ikhule yaba sisiseko esaziwa kakuhle kwiimarike zalapha ekhaya nakwamanye amazwe ngama-55% emithamo yemveliso esasazwa eYurophu, eMelika nase-Australia.
Ngokuhambelana nokuzinikela kwethu ekuqhubekekeni ukuphucula ukusebenza kwaye sihlale siphambili kwintengiso emxinwa yelaphu, uNarrowtex ubambe ezi ziqinisekiso zilandelayo:
Indawo yokuvelisa i-Narrowtex elabhoratri isetyenziselwe ukuvavanywa okuqhubekayo kumanqanaba ahlukeneyo emveliso, kuqinisekisa ukuhanjiswa okungaguqukiyo kweemveliso ezisemgangathweni.
I-Narrowtex ikwasebenzisa iiLebhu ezivunyiweyo kulungelelwaniso okt umatshini wokuqina kwaye unezatifikethi zokulinganisa ezikhutshwe yiLebhu evunyiweyo. Ukuba iyafuneka kubathengi, iNarrowtex inokubonelela ngoku kulandelayo:
Ingxelo Tensile Test
Ezi zatifikethi zidwelisa iinkcukacha zabathengi kunye nezona ziphumo zovavanyo.
Indawo yokuvelisa iNarrowtex kunye ne-ofisi elikomkhulu loMzantsi Afrika kwidolophu esembindini yedolophu yase-Estcourt, apho abahlali bezalisekisa iimfuno zabasebenzi basefektri, babonelela ngemisebenzi edingeka kakhulu kule ndawo. Oku kuyinxalenye yenkqubo yoxanduva kwezentlalo yeNarrowtex ekwanceda izikolo zasekuhlaleni ngezemali okanye ezinye iimfuno ezithile zekapitali.
I-Narrowtex yinxalenye ye- IQela le-NTX eyinxalenye ye I-SA BIAS Industries Pty Ltd.
Indlela ye-253 Loskop
Inombolo yomnxeba: (+27) 36 35 23108
Ephothiweyo ipholiyesta Lashing
Umtya olukiweyo wePolyester
Ukubopha / ukuHamba kweHotmelt
Ukuqhaqha kunye neempawu zokubopha
Isisombululo seLashing Cargo
Ilungelo lokushicilela © 2020 | I-Narrowtex eyinxalenye yeQela le-NTX eliyinxalenye ye-SA BIAS Industries Pty Ltd.